कान पाक्ने समस्या छ ? कसरी जोगिने ? चिकित्सकको सुझाव यस्तो छ (भिडियो सहित) | Hamro Doctor info@hamrodoctor.com
कान पाक्ने समस्या छ ? कसरी जोगिने ? चिकित्सकको सुझाव यस्तो छ (भिडियो सहित) Home
कान पाक्ने समस्या छ ? कसरी जोगिने ? चिकित्सकको सुझाव यस्तो छ (भिडियो सहित)
Jan 08, 2017 15:01
6.5K0comments
कानमा लाग्ने रोग हेर्दा साधारण लागे पनि समयमै उपचार भएन भने यसले अन्य अंगमा पनि असर गर्न सक्छ । कानमा देखिने समस्या मध्ये सबैभन्दा धेरै कान पाक्ने समस्या हो । जुन सुकै लिङ्ग, उमेर समुहका मानिसमा यो समस्या देखिन सक्छ । हाम्रो देशको सन्दर्भमा कान पाक्ने समस्या अझ धेरै छ । कारण कानको हेरचाहामा ध्यान नदिनु ।
घाँटी र कान जोड्ने नसा एउटै हुन्छ । यस्तो नसा वा नली बच्चाहरुमा सिधा रहेको हुन्छ भने ,उमेर बढेसंगै प्रौढहरुमा यस्तो नसा टेडो हुन्छ । त्यसका कारण बच्चाहरुमा घाटीमा संक्रमण हुने बित्तिकै सिधै कानमा असर गर्छ र छिट्टै पाक्छ । प्रौढहरुमा भने रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि बढी र नशा टेडो भएकाले संक्रमण कम हुने गर्छ । कान पाक्ने प्रमुख कारण :
३.दुर्घटना, झगडा वा कानमा असर पुग्ने गरि कानको जाली फुट्दा ।
४.टन्सिलको समस्या हुँदा ।
लगातार कान पाक्दा कान ढम्म हुनुका साथै दुख्ने हुन्छ । कान पीप बगिरहँदा कानको भित्री भागमा समेत संक्रमण हुन्छ । कानको जालीनै प्वाल पर्ने भएकाले कम सुन्ने वा सुन्दै नसुन्ने हुन सक्छ ।
कान पाक्ने समस्याको बेलैमा उपचार नगर्दा यस्ता असर देखा पर्नसक्छ
८. जथाभावी औषधिको प्रयोग नगर्ने ।
कानमा कुनै समस्या आईहाल्यो भने, तत्काल चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम औषधि सेवन गर्नुपर्छ ।
Dr. Nar Maya Thapa
Metro Kathmandu Hospital isamulti specialty hospital.